संसारलाई नै रु’वाएको यो तस्बिर ! एकै परिवारका ५ जनाको मृ’त्यु भएको थियो ! – eSidhakura
४३ seconds अघि
मुख्य पृष्ठसमाचारसंसारलाई नै रु’वाएको यो तस्बिर ! एकै परिवारका ५ जनाको मृ’त्यु भएको थियो !
संसारलाई नै रु’वाएको यो तस्बिर ! एकै परिवारका ५ जनाको मृ’त्यु भएको थियो !
काठमाडौं। इण्डोनेशियामा श्री’विजय एयरको विमान दु’र्घटनामा परेको एक परिवारले विमान उ’ड्नु ठिक अघि सामाजिक संजालमा गरेको पोस्टले त्यो परिवारको दुः’खद नि’यतिको खु’लासा गरेको छ । उनीहरुलाई नि’यतिले ता’नेर मृ’त्युको मुखमा पुर्याएको पाइएको छ । राती वि’न्डानिया नामकी एक महिलाले विमानको सिटमा बसेर आफ्ना तीन छोराछोरीसँगै खिचेको से’ल्फी सार्वजनिक भएपछि उनीहरुको दु’खद नि’यतिको खु’लासा भएको हो । उनले तस्वीर पोस्ट गर्दै आफूहरु घर जान लागेको उल्लेख गरेकी थिइन् ।
उनका अनुसार उनको परिवारले चाँ’डैको उडानमा घर जाने योजना थियो । त्यो जहाज श्री’विजयले नै संचालन गरिएको नाम एयरको उडान थियो । तर, उनीहरुले किन उ’डान परिवर्तन गरे भन्ने विषयमा उनी आफैं अ’नपिभत्र छन् । उनकी बहिनी र उनका छोराछोरी तीन हप्ताको वि’दाको समय सकेर पश्चिम का’लिमान्तान द्वी’पमा रहेको पो’न्तियानाकस्थित आफ्नो घर जाँदै थिए । ‘उनीहरुलाई विमानस्थलसम्म गाडीमा मैले नै लगेको थिएँ, चे’क इन र ल’गेजको लागि पनि सहयोग गरेकको थिएँ । यस्तो लागिरहेको छ, म अझै यसलाई विश्वास गर्न सकिरहेको छैन ।